DHAGEYSO Warbixin Xiiso leh: Guurka Soomaalida qurbaha iyo Ajaaniibta
Qoyska Shukri Saciid /Photo Credit: VOA
Nairobi (Halqaran.com) – Waxaa sanadihii tegay soo badanayey guurka u dhaxeeya Soomaalida qurbajoogta ah iyo dadyowga ay dalalkooda ku soo haajireen.
Gobollada Soomaalida Mareykanka ay ku dhaqan yihiin waxaad ku arkeysaa wiil Cadaan ah iyo gabar Soomaali ah oo ama gabar caddaan ah iyo wiil Soomaali ah oo isguursaday.
Sidoo kale guurka noocan ah ayaa ka jira qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo Afrika.
Haddaba, weriyaha laanta Af Soomaaliga ee VOA-da Sahra Cabdi Axmed ayaa dhowr lamaane kala sheekaysatey macaan iyo qaraar wixii kasoo qabsadey guurkooda.
Halka hoose ka dhageyso Warbixin Xiiso leh:
Tags: Qoyska Shukri Saciid, qurba joogta Soomaalida, Soomaalida guursaday Ajaaniibta
Maxay qaban doonaan ciidankii NISA ee diyaaradda ka qaaday Muqdisho ee ka degay Deg.Baardheere?